नेपालको अदालत दीप बस्न्यातका लागि मात्र खुला छ ? - || वर्णन मिडिया - सूचना तथा समाचारको संवाहक ||
अहिले दीप बस्न्यातका लागि महामारी र निषेधाज्ञाका बीच अदालत खोलेर जोखिम मोलेर किन जस्केलाबाट सुनुवाइ गरिँदै छ ?
२०७८ बैशाख २१, मंगलवार १९:२९:००
वैशाख १९ गते सर्वोच्च अदालतले एक अनौठो आदेश गर्यो । भ्रष्टाचार मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेको अख्तियारका पूर्वप्रमुख दीप बस्न्यातलाई थुन्नुको कारण के हो भनेर न्यायाधीश मीरा खड्काको इजलासले आदेश गरेको थियो ।
बस्न्यात किन थुनामा गएका हुन् भन्ने दुनियाँलाई थाहा छ । निषेधाज्ञाका बीच अदालत खोलेर, इजलास राखेर तल्ला अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनुवाइ भइरहेका र दोषी देखिने आधार पर्याप्त रहेको प्रारम्भिक सुनुवाइमा देखिएका कारण थुनिएका बस्न्यातलाई थुन्नुपर्ने कारण सोधेर सर्वोच्चले जग हँसाइ गरेको हो ।
बालुवाटारको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा बस्न्यातले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको सचिव छँदा भूमि सुधारको क्षेत्राधिकारमा पसेर भूमाफियाको पक्षमा निर्णय गराउन कागजात तयार गरी टिप्पणी उठाई मन्त्रिपरिषदमा पठाएको मुख्य अभियोग छ । त्यो विषय विशेष अदालतमा विचाराधीन छ । त्यही प्रकरणको प्रारम्भिक सुनुवाइमा विशेष अदालतले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको छ । बस्न्यात यस प्रकरणका मुख्य अभियुक्तमध्येका हुन् ।
विशेषको उक्त आदेशविरुद्ध बस्न्यातले सर्वोच्चमा निवेदन दिएकै थिए । त्यसमा सुनुवाइ भइरहेकै थियो । त्यसले पुगेर बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट समेत सर्वोच्चले ग्रहण गरेर अर्को जगहँसाइ गरेको छ । सर्वोच्चले ग्रहण गर्नै नमिल्ने निवेदन ग्रहण गरेर मुलुकको न्यायालय शक्तिशाली, प्रभाव र पहुँच हुनेहरु र भ्रष्टाचारीका लागि जस्तोसुकै अवस्थामा खुला रहन्छ भन्ने सन्देश दिएको छ । यस्तै व्यक्तिहरुलाई विशेष सहानुभूति, माया र संरक्षण दर्शाउँछ भन्ने सन्देश पनि यसबाट प्रवाह भएको छ ।
कोभिड जोखिमका कारण बस्न्यातलाई रिहा गर्ने हो भने देशभरका १० हजारभन्दा बढी थुनुवालाई मुक्त गरी जेल खाली गर्नुपर्ने हुन्छ । किनभने उनीहरु कोही पनि सुरक्षित छैनन् । बरु बस्न्यात विशेष सेवा, सुविधा र सहुलियत पाएर बसेका छन् । उनी चाहेको उपचार गराउन सक्छन् । तीभन्दा कमजोर आर्थिक र शारीरिक अवस्था भएका कयौँ थुनुवाले एक निवेदन लेख्ने समेत छूट र सुविधा पाएका छैनन् ।
यसअघि चूडामणि शर्मालाई समेत भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेकै अवस्थामा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनका भरमा सर्वोच्चले छोडिदिएको थियो । त्यसैगरी अहिले दीप बस्न्यातका लागि महामारी र निषेधाज्ञाका बीच अदालत खोलेर जोखिम मोलेर किन जस्केलाबाट सुनुवाइ गरिँदै छ ? अहिले राज्यको स्रोतसाधन दीप बस्न्यातमा केन्द्रित गर्ने बेला हो कि अरु पनि प्राथमिकता छन् ? प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र सर्वोच्च प्रशासनमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।